Arsenal oo diyaar u ah inay 75 milyan ku qarash-geyso saddex saxiix ka hor inta aysan Mikel Arteta u magacaaban macallinkeeda cusub – Gool FM
(London) 18 Maajo 2018. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa diyaar u ah inay 75 milyan oo gini kula soo wareegto saddex saxiix oo cusub ka hor inta aysan Mikel Arteta si rasmi ah ugu magacaaban macallinkeeda cusub.
36-sano jirkaan ayaa hoggaanka u haya ragga soo saadaalinayo inay bedeli doonaan booska uu ka baxay Arsene Wenger, waxaana la soo sheegayaa inay madaxda Gunners wadahadallo kula jireen usbuucaan.
Wargeyska The Sun ayaa warinaya in madaxda kooxda Arsenal ay doonayaan inay suuqa kala iibsiga kala soo wareegaan saxiixyo cusub oo ay durba wadahadalladooda bilaabeen, waxaana ay soo qaadanayaan wixii loo gaaro 1 bisha June.
Warbixintu waxa ay sheegayaain Arsenal ay 15 milyan oo gini ugu dhaqaaqeyso difaaca dhexe ee kooxda Borussia Dortmund, Sokratis Papastathopoulos.
Xiddiga reer Giriig ayaa qiimo jaban lagu heli karaa madaama heshiiskiisa Dortmund uu kaga harsan yahay hal sano oo qura, waxaana uu u sheegay kooxda ka dhisan Bundesliga inuusan heshiiska u cusbooneysiin doonin.
Arsenal ayaa sidoo kale rabta inay la soo saxiixatay difaacana dhexe ee kooxda reer Turki ee Freiburg, Caglar Soyuncu.
Difaacan reer Turki ayaa qiimo ahaan kooxda Arsenal ugu kacaya 35 milyan oo gini oo ay rabto inay ku soo xero geliso.
Bernd Leno ayay sidoo kale Gunners indhahaha ku haysaa kaasoo ay u aragto bedelka waqtiga dheer ee goolhaye Petr Cech.
26-sano jirkaan ka tirsan kooxda Bayer Leverkusen ayaa sheegay inuu ka fikirayo inuu u dhaqaaqo Arsenal, kooxda Gunners ayaana isku diyaarinaysa inay 25 milyan oo gini ku soo qaadato goolhayahan.